sawirada ugu quruxda badan aduunka - iftineducation.com
sawirada ugu quruxda badan aduunka
iftineducation.com – Wadamada ku hormaray dhaqaalaha ayaa ku tartamaayo soo bandhigida goobo lagu nasto oo aad u quruxbadan.
Hadabada daraasad ay sameeyen khubaro ku taqasusay Beerashada beeraha ayaa waxa ay beerta ama Xadiiqada ugu quruxda badan Caalamka u aqoonsadeen inay tahay Xadiiqada lagu magacaabo ”Xadiiqada Dubai” oo ku taalla bartamaha dalka isutaga imaaraadka Carabta.
Xadiiqadaasi ayaa waxaa ka howlgala inkabadan 150 shaqaale oo badankood u tababaran soo dhaweynta Lamaanayaasha u nasiinka doonanaayo Xadiiqada waxa ayna dhismo ahaan aad uga duwan tahay beeraha kale ee ku yaalla Caalamka.
Xadiiqadaani ayaa kaalinta koowaad ka gashay Caalamka sanadaani aan ku jirno 2015, waxaana ku baxa dhaqaale aad u badan.
Waxaa inta badan lagu qabsadaa Xafladaha arooska, qalinjabinta iyo munaasabadaha kale,
Tobanka gabdhood ee ugu quruxda badan gabdhaha Madaxweynayaasha Afrika + Sawirro
ninka aduunka ugu lacagta badan